နေ့များ: March 2009
တရားဖို့ မျှတဖို့ တရားမျှတဖို့
Posted by KZကေ at 23:472comments:
ခေတ်မှီသူများ Wသုံးလုံး နှင့် @.comဟာဆောင်ကြွားကြွား
လူ့ဘဝ၏ကျိူးကြောင်းစုံလင်သည့်ပြကွက်များ ကဒ်ပြားအသစ်Code နံပါတ်နှင့်ချစ်ရပါသော ဝေးလံသူများ
ပလာတွန်ကာရာတာယက် - လယ်သမားစစ်သားကြီး
Tolstoy ၏ စစ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး…… ဆရာမြသန်းတင့်ဘာသာပြန်မှ
Posted by KZကေ at 22:01 No comments:
ဒီတော့စာပေအနုပညာမှာကြားခံဘာသာစကားရဲ့visual effect မရှိသဖြင့်အစဉ်အလာဖွဲ့ထုံးများမှခွဲထွက်
သော်စိတ်ပါဝင်စားမှုအနဲပါးဆုံးဖြစ်မည် ဆိုသည့်ကောက်ချက်ကို သီးခြားစဉ်းစားရပါမည်။ (ခင်မောင်ရင်၏
နှမလက်လျှော့နေလေတော့ ရုပ်ရှင်။ အီတာလျှံ နှင့် ပြင်သစ်တို့မှ လှိုင်းသစ် ရုပ်ရှင်လှုပ်ရှားမှုများလည်း အတော်တွန်းထိုးလွန့်လူးခဲ့ရပါသည်)။
အယူအဆများရှိနေပြီးဖြစ်သည်။ (ကျနော်အနည်းငယ်ဖွင့်ဆိုခဲ့သည့် structuralism မှာ language
ထောင့်မှ ချဉ်းကပ်မှုသာဖြစ်ပြီး မနုသဗေဒ စာပေ ယဉ်ကျေးမှုစသည်ဖြင့်အခြားချဉ်းကပ်မှုများ
လည်းရှိပါသေးသည်။ ထိုမှတဆင့် ခုအသုံးများသော binary oppositions, semiotics စသည့်အယူအဆများမှသည် post-structuralism နှင့် postmodernism များ၏အဆက်အစပ်များရှိနေပါသည်။ ကျနော်တို့ဆီတွင် ပညာရှင်များအားထုတ်ကြသော်လည်းကျယ်ပြန့်ရန်လိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်ကတော့ဘာမှမဟုတ်ပါပဲတတ်စွမ်းသမျှ လေးရေးကြည့်တာ ဖြစ်ပြီးရှုတ်ထွေးခဲ့သော် အမှားအယွင်းများတွေ့ခဲ့သော် နားလည်စေချင်ပါသည်)
ကျနော့်အမြင်တွင် စာရေးသူတဦးသည်သူ့ခံစားချက်အတိုင်းစာဖတ်သူသိမြင်နိုင်ရန်အားထုတ်လိုပါသော်လည်း ဖန်တီးမှုအပိုင်းတွင်ကြားခံဘာသာစကား၏ကန့်သတ်မှုအပြင်သူ့ခံစားချက်မှသည်အနုပညာပစ္စည်းတခုဖြစ်လာ
သည်ထိ ဖြတ်သန်းသည့်အဆင့်များတွင်ပင်လွတ်ကျကျန်ခဲ့နိုင်ပါသေးသည်။ (အော်ဒီနေ့အင်းလျားကလေတွေမွှေးပါတယ်
မှတ်တယ် မြကြာဖြူလာတာကိုး...ဆိုသည့်တင်အောင်နီကာတွန်းစာသားကို ကိုးကားပြပါရစေ။ အခန့်မသင့်ရင်သူ့ဆိုလိုရင်း
ဖန်တီးမှု၏ပြင်ပတွင်မူ (စာဖတ်သူလက်ထဲရောက်သွားသည့်အခါ) အနုပညာတခုကိုခံစားသူကဘယ်ပုံ
ခံစားသည်ဆိုသည့်အချက်မှာ စာဖတ်သူ၏ဘ၀ဖြတ်သန်းမှု အတွေ့အကြုံ ဆည်းပူးလေ့လာမှု နှင့် အနုပညာလက်ရာကို အရသာခံလိုစိတ်တို့ကိုလည်းထဲ့သွင်းစဉ်းစားရပါတော့မည်။
Bob Perelman က china ကဗျာကို တရုတ်တန်းမှာလမ်းလျှောက်သွားရင်း တရုတ်ပြည်တွင် ရိုက်ထားသည့် ဓါတ်ပုံအယ်ဘမ်တခုကဓါတ်ပုံများကိုကြည့်မိပြီးရေးခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ဂျိမ်းဆင်ကသူ့ဝေဖန်စာကိုအဲဒီအချက်
ကိုသိပြီးမှရေးတာဖြစ်သော်လည်း ကျနော်ကကဗျာဖတ်ပြီး ဆိုနေကျသီချင်းကဗျာကိုသတိရသွားစဉ်က
ဒီအကြောင်းမသိရသေးပါ။ ပြောချင်တာက ဖန်တီးသူဘက်တွင် ပဲလ်မင်းကဓါတ်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီး သူထင်ရာရေးသွားတာလား။သူ့ရှိရင်းစွဲ ပုဂ္ဂလိကခံစားချက်များနှင့်ထင်ဟပ်ညှိနှိုင်းရေးသွားတာလား ဆိုတာကတော့ သူသာသိပေမည်။ ဖတ်သူကျနော့်ဘက်တွင်မူ ဒီကဗျာကိုဘယ်လိုအဆက်အစပ်တွေနဲ့
ဘယ်ပုံရောက်အောင်ခံစားမိသွားသည်ဆိုတာကအခြားအပိုင်းတပိုင်းဖြစ်နေသည်။ ဒီအထဲ ကဗျာဆရာကLP
အနှစ်ချုပ်လျှင်မီဒီယံကတော့သုံးရဦးမည်။ မီဒီယံကိုမသုံးချင်သည့် Conceptualist များလည်းရှိပါသည်။ အိမ်သာကမုတ်ကြီးပြပွဲတင်တာတွေလည်းရှိပါမည်။ ကြိုက်သူများကြိုက်ပြီးကဲ့ရဲ့သူများလည်းရှိကြသည်ပင်။
ကြားခံမကြိုက်လို့ လူကိုယ်တိုင်သရုပ်ဆောင်ပြသည့် performance တွေလည်းရှိသည်။ သို့သ်ာဒီမှာလည်းလူက
ကြားခံဖြစ်ရသည်။ ဒါက Material ပိုင်းဆိုလျှင် processing မှာလည်းပြောခဲ့သလိုထွက်ကျသွားနိုင်တာတွေရှိ
သည်။ နောက်ဆုံး end user ကလည်းသူ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအပြည့်ရှိနေသည်မဟုတ်ပါလား။ ဖွဲ့ထုံးပြသနာကစာပေ
အနုပညာနဲ့ Reality ရှာတာပါဆိုရင် ပရမတ်ကို ပညတ်နဲ့ဖမ်းတာ မှားမှန် ကျနော်လည်းမဝေဖန်
Posted by KZကေ at 00:43 No comments:
ဒီနေ့မေးတွေစစ်ပြီးဖျက်သင့်တာဖျက် သိမ်းသင့်တာသိမ်း ပြန်သင့်တာပြန် တွေလုပ်ရင်း
သူငယ်ချင်းတယောက်ပို့ထားတဲ့ ဟာသလေးတွေထဲကကောင်းမယ်ထင်တာတွေ မဖျက်ခင်
ယောင်္ကျား။ ။မိန်းမတွေကျတမျိုးကွ။ ပြောလိုက်ရင်နား၂ဘက်စလုံးက၀င်သွားပြီးပါးစပ်က
ကောင်မလေး။ ။ကိုသက်ကပြောတော့ငါ့ကိုချောတယ်တဲ့။ ဖိုးချိုကတော့ရုပ်ဆိုးလိုက်တာတဲ့
ကောင်လေး။ ။အင်း၂မျိုးလုံးနဲနဲစီမှန်တာပဲ။ နင်က ချောချောမောမောကိုရုပ်ဆိုးတာ
ဆရာ။ ။မောင်လှ မင်းစကားများလှချည်လား
မောင်လှ။ ။အဖိုးကလမ်းဘေးဈေးသည်။ အဖေကကျောင်းဆရာပါ
လူနာ။ ။ဆရာ ကျနော့်အခြေအနေကောင်းမယ်မလား
ဆရာဝန်။ ။ရာနှုန်းပြည့်ကောင်းစေရမယ်။ မှတ်တမ်းတွေအရဆိုရင်ဒီရောဂါက
ကျုပ်အတွက်ဒါ၁၀ယောက်မြောက်။ မပူနဲ့ ရှေ့ကကိုးယောက်သွားပြီ
Posted by KZကေ at 12:40 No comments:
System of signs ကို structure လို့ ဆောဆူးကွယ်လွန်ပြီးတော့နာမည်ပေးတယ်။
Sign ကကောဘာကိုဆိုတာလဲ။ သူက word စကားလုံးတလုံးပဲ။ ရေ ဗျာ water ဒါဟာ sign တခု။ ပြီးတော့
ဒါဟာ form ။ အဲဒီမှာ ၂ပိုင်းရှိနေတယ်။ ရေ ဆိုတဲ့စကားလုံးကတခု။ ရေလို့သိလိုက်တဲ့အသိကတခု။
ဒီ၂ခုကို structuralism က signifier နဲ့ signified လို့ခွဲလိုက်တယ်။ sign ကို၂ မျုိုးခွဲတာ။ အညွှန်းနဲ့ အညွှန်းခံပေါ့။
ပထမမှာစကားလုံးနဲ့ အသိကြားကအဆက်အစပ်က အတိအကျမပြောနိုင်ဘူး။ ကြာလာတော့ဒါဟာ ဓလေ့တခု သို့ စည်း တခုဖြစ်လာတယ်။ arbitrary ကနေ convention ဖြစ်လာတယ်။
ပြီးတော့ ရေ အစား ဘီယာ လို့ပြောရင် sign ပြောင်းသွားသလို meaning လဲပြောင်းသွားတယ်။
ဆိုတော့ ပုံသဏန်ပြောင်းတော့ အဓိပ္ပါယ် ပါလိုက်ပြောင်းတယ်။ sign တခုနဲ့တခုမတူရတဲ့အကြောင်းရင်းကအဓိပ္ပါယ်
ကိုကွဲအောင်လုပ်လိုက်တယ်။ ခြားနားခြင်းကအဓိပ္ပါယ်ကိုဖြစ်စေတာ။ အဓိပ္ပါယ်ကိုကျနော်တို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။
ရှေ့မှာပုံသဏန်နဲ့အဓိပ္ပါယ်ကချိတ်ပြီးပါလာတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ (bounding up လို့ပြောတယ်)။
structure ကအဓိပ္ပါယ်ကို ဖြစ်နိုင်စေတယ် (possible) ဆိုတာနဲနဲတော့ရှင်းလာပြီ။
သူကတဆင့်ထပ်တက်တယ်။ သစ်ပင်ဆိုပါတော့။ အဲဒီစကားလုံးကနေ သစ်ပင်ဆိုတဲ့အသိက reality ကိုသိတာ
မဟုတ်ဘူး။ သစ်ပင်ဟာပြင်ပလောကမှာဘယ်အရာဝထ္ထုတခုကိုကိုယ်စားပြုမလဲ။ ဒီအသိက
သရက်ပင် မာလကာပင် စသည်ဖြင့်အစုအဝေးတခုရဲ့ concept ကိုသိလိုက်တာ။
အစစ်အမှန်မဟုတ်ဘူး။ တခါ မြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးပဲရှိပြီး မြည်းဆိုတဲ့စကားလုံးသာမရှိခဲ့ရင်
မြည်းတွေ့တိုင်းမြင်းလိုကောင်လို့ ပြောတော့ပဲ။ ချုပ်လိုက်တော့လူတယောက်ရဲ့အသိ
အမြင်နဲ့ ခံစားမှုတွေကို သူမမွေးဖွားခင်ရှိခဲ့တဲ့ ဘာသာစကားက ကန့်သတ်ခဲ့တယ်။ အစစ်အမှန်တရားကို လူဟာ
Posted by KZကေ at 14:172comments:
အဲဒီမှာ စာပေအနုပညာရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံ နဲ့ အနုပညာဖန်တီးမှုမှာ မီဒီယံ ရဲ့
ပြောရရင် ဂျိမ်းဆင်ကို ကိုးကားရာမှာ china ကိုကျနော်ဖော်ပြချင်တဲ့ရည်ရွယ်ရင်းကနေ
လိုသလောက်ယူခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ နောက်ကဗျာတပုဒ်ရေးဖြစ်ပုံကို အရင်စိတ်အခံများ
နဲ့ဆက်စပ်ကြည့်ခဲ့တယ်။ ခုမှတ်ချက်ကိုကြည့်ပြီး အရင်ကလည်းရေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာ
ဒီနှစ်ခုညီညွတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာ။ form နဲ့ content ဘာပိုအဓိကကျသလဲပြောကြရင်
ကောင်းပြီ ကျနော်တို့ကင်မရာတလုံးကို ကုန်သည်ကြီးများဟိုတယ်ပေါ်ကနေ
ဘာဖြစ်လို့လဲ။ နာရီဝက်အတွင်းမှာဦးထုပ်၁၀လုံး။ ကားအစီး၅၀။ လူ ၇၃ ယောက် စသည်ဖြင့်
တွေ့နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် အဲဒီထဲကမှ အတွဲ၁တွဲနောက်ကိုတောက်လျှောက်လိုက်ရိုက်မယ်။
ရှေ့က နောက်က အတွဲကပန်းခြံထဲထိုင်နေရင် ဟိုးတိုက်အမြင့်တနေရာက ကင်မရာထောင့်တွေ
ပြောင်းမယ် ကစားမယ် ဆိုပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ရှိလာမယ်။ ဘာလို့လဲ form ၀င်လာတာကိုး။
အနုပညာမှာ အကြောင်းအရာကောင်းရင်ပြီးတာပဲနဲ့ရပ်နေလို့မရဘူး။ (နာမည်ကြီးမင်းသားမင်းသမီးအတွဲကို နောက်ကလိုက်ပြီးတချိန်လုံးရိုက် ကြည့်လို့ကောင်းမလား) ပုံသဏန်ကိုလည်းဂရုစိုက်ရတယ်။
သို့ပေသည့် စာဖတ်သူတယောက်ကို form တို့ structure တို့သွားပြောရင်ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။
သူတို့စာဖတ်တာ သို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်တာဟာ ဒါတွေကိုလေ့လာဖို့မဟုတ်ဘူး။
သို့သော်ပြောခဲ့သလို form ကိုရှောင်လို့မရဘူး။
ဒါဆို structure ဆိုတာကကောဘာဖြစ်မလဲ။ နဲနဲဆက်ကြရအောင်။
Structure က form ထက်ပိုအခြေခံကျတယ်။ form ကအဓိပ္ပါယ်နဲ့တွဲလာတယ်။ Structure ကျတော့
အဓိပ္ပါယ် ကို possible ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတယ်။ ဒီတော့ရှင်းဖို့လိုလာပြီ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့က အဓိပ္ပါယ်ကို ကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်ထင်ထားတာကိုး။
Structuralism ကို ဆွစ်ဘာသာဗေဒပညာရှင် ဖာဒီနန်ဆောဆူး ကစခဲ့တယ်။
သူ့အရင်ပညာရှင်တွေက ဘာသာဗေဒကိုသမိုင်းနဲ့ယှဉ်ပြီးလေ့လာတယ်။ ဥပမာ Eat ဆိုတာက စားတာ။
ဒီစကားလုံးဟာ လက်တင်ဘာသာက Ear ကနေလာပြီး ဘယ်သို့ဘယ်ပုံပြောင်းတယ် စသည်ဖြင့်ပေါ့
ဂျာမာန်မှာဘယ်လိုသုံးတယ်။ ပြင်သစ်ဘာသာနဲ့ရောပြီးဘာညာပေါ့ ဒီအရွေ့နဲ့အဆက်အစပ်ကိုရှာကြတာ။
တချို့ပညာရှင်တွေက သဒ္ဒါကိုအာရုံကျတယ်။ ဒီစကားလုံးကနာမ် ပြီးတော့ ful ပေါင်းလိုက်ရင် နာမ၀ိသေသန။
ဆော့ဆူးကတမျိုး။ သူကလုံးဝကွဲသွားတယ်။ သူကဘာသာစကားအားလုံးရဲ့တည်ဆောက်ပုံစနစ်ကိုသိဖို့ကြိုးစား
တာ။ နောက်ပိုင်းမှာဒါကို system of sign (structure) ဆိုပြီးခေါ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆောဆူးက structure
Posted by KZကေ at 22:15 No comments:
Posted by KZကေ at 14:39 No comments:
ဗြူတီ မှာ၂၀၀၃ တုန်းကပါဘူးတဲ့ကဗျာတပုဒ်တင်လိုက်တယ်
Posted by KZကေ at 22:36 No comments:
လွယ်ကူအောင် သူ့အလိုလိုရိုးစင်းသွားအောင် ကျွန်တော်မပါပဲ
သမရိုးကျ ရိုးမြေကျ အစိမ်းမှအရင့်တိုင်အောင်
Posted by KZကေ at 00:062comments:
ဗြိတိလျှတွေကသူ့ကိုခိုလှုံခွင့်မပေးတော့ ဒူဘိုင်းက တည$500 တန်ဟိုတယ်တခုမှာချို့တဲ့စွာနေရသည်
ကျနော်ဒီတခေါက်မက်တာပွတ် (ပတ်တရာနားကစက်မှုဇုံမြို့လေး) ရောက်တော့ တည ဘတ်တထောင်
နာမည်နဲနဲ ရှိသည့် ဒေသခံ ရက်ဂင်စီ ဘရန်ဒီလေး မြည်းကြည့်မိပါတယ်
၃ပက်လောက်ဝင်သွားတော့ ဂါဇာမဟုတ်သည့် ပတ်တရာကမ်းစပ်မှာ ကျနော့်အလွမ်းဓတ်က တဖျတ်ဖျတ်
(နော်မန်ဒီတုန်းကတော့ အံမယ် မနူးမနပ်ကဗျာဆရာက တိုက်ချင်ခိုက်ချင်စိတ်တွေပင် ၀င်ဖူးသည်)
ခုတော့ လီရှန်လွန်းတို့ ကျွန်းဋ္ဌာနေမှာ တိုးနယား တွေက ယိုးဒယား သမင်လိုက်သလိုမဟုတ်
ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဂျက်ကီးချန်းရယ်သလို စပ်ဖြဲဖြဲ ဂီတ နှင့်
နှစ်ကူးဆိုတော့ ဘောင်းဘီတိုလေးတွေနဲ့ အိမ်ပြန်သွားသည့်
မလေးတရုတ်မလေးတွေ ပရိုမိုးရှင်းလုပ်သည့် ဆူဝေသောဘီယာဆိုင်တွေပင် တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်
ဒီနေ့ တပီပါ ၄၅.၆၂$, ဓတ်ငွေ့ One MM BTU ကို ၄.၄၉$ ။ နှစ်ခုစလုံးနဲနဲစီကျ။ CAC 40
ဒီမနက်ဘွန်လေးက မြန်မာထမင်းဆိုင်မှာ ၀က်သားနဲ့ မျှစ်နဲ့ ရုံးပဒေသီးကျော်နဲ့ အရင်ဈေးပဲ S$ 3.5
ဆက်သွယ်ခြင်း ၃ ကို တယောက်ယောက်က တခုခုပြောလျှင် ကောင်းမှာပဲဘာလို့ထင်မိပါလိမ့်
ကျောက်မီးသွေး၏ နာကျင်သောခွန်အားမှာ လင်းနေသောအနက်ရောင်ပင်
Posted by KZကေ at 16:002comments:
အလုပ်သမားခံစားမှုအဖွဲ့။ လတ်တလောလုပ်ငန်းခွင်အခက်အခဲတွေ။ အစွဲအလမ်း။
လျှင်လျှင်သစ်ပင်များမြန်မြန်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာThe landscape is motorized ရဲ့ပယောဂများလား။ ကဗျာနှစ်ပုဒ်ပေါ်ရဲ့အဆက်အစပ်နဲ့ညွှတ်ချက်တွေ။
နွေလယ်နေရဲ့ မြို့ကြီးတွေဟာ မင်းမပါလည်းပျင်းစရာမဟုတ် ဆိုတဲ့ R&B သီချင်းတပုဒ်နဲ့
ဂျိမ်းဆင် ကလက်ဝဲကိုသစ်စေချင် ပဲလ်မင်းကဘာသာစကားကိုသစ်စေချင်
The train takes you where it goes ပေါ့။ ဘာဖြစ်သေးလဲ ။
ရောင်းစားလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ ဘ၀ကိုဒါးစက်ပြန်သချင်သူ အထည်ချုပ်သမလေးရဲ့နေ့တွေ ချုပ်ရိုးချုပ်သားဖြောင့်တန်းပါစေ ရုတ်တရက်များ စိတ်ကူးခဲ့မိလေသလား။
Posted by KZကေ at 15:56 No comments:
တနေ့မှာ Fredric Jameson (အမေရီကန်မတ်ဝါဒီလက်သစ်စာပေအနုပညာဝေဖန်ရေးဆရာ) ရဲ့ The postmodernism or the cultural logic of late capitalism စာအုပ်ရဲ့တနေရာမှာ China ဆိုတဲ့ကဗျာတပုဒ်ကိုဖတ်ရတယ်။
We live third world from the sun, number three, nobody tells us what to do.
The people who taught us to count are being very kind.
It is always time to leave.
A sister who points to the sky onceadecade isagood sister.
The train takes you where it goes
Bridges among water
ရေးသူ အမေရိကန်LP (Language Poetry) ကဗျာဆရာ Bob Perelman ပါ။
အဓိပ္ပါယ်တခုရဖို့မဖြစ်နိုင်သော်လည်း ဒါဟာ စူးစမ်းချင်စရာ ထိမ်ဝှက်ဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ နိုင်ငံရေးကဗျာတပုဒ်အဖြစ်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်ပြည်သစ်ရဲ့မပြီးဆုံးသေးတဲ့ လူမှုရေးစမ်းသတ်ချက်တွေ မမျှော်လင့်ပဲ ဆူပါပါဝါနှစ်ခုကြားကပေါ်ထွက်လာမှု။
မြေပိုင်ရှင်စံနစ်နဲ့ အင်ပိုင်ယာစံနစ်မှာ နှစ်များစွာကြာခဲ့ပြီးပထမဆုံးထွက်လာတဲ့ Collective destiny
သို့သော် ကဗျာရဲ့ညီညွတ်စည်းလုံးမှု (Unity, ဒီမှာတော့ အဓိပ္ပါယ် လို့သဘောယူလည်းရနိုင်ကောင်းမယ်) ဟာဘာသာစကားရဲ့ဘောင်ထဲမှာမရှိတော့ပဲအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါသေးတယ်။
ကျနော်ကတော့ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် ၂၀ နီးပါးက ဆိုနေကျသီချင်းကို
Posted by KZကေ at 15:543comments:
ဆောင်းပါးမစခင်အမြဲတမ်းဖော်ပြလေ့ရှိ တဲ့အချီအချစကားပြောခန်းတခုရှိပါတယ်။ ဆရာဇော်ဂျီဘာသာပြန်တဲ့ပလေတိုးနိဒါန်းထဲကပါ။
ကဗျာဖတ်သူဟာ ကဗျာရေးသူပေးချင်တဲ့ အချက်ကိုရသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
Posted by KZကေ at 15:40 No comments: